Kwabo alazi sele, Black Forest yeyona ndawo ezinamahlathi enkulu emazantsi-ntshona Germany. ngaphezu, its ise kwiphondo Baden-Württemberg kwaye ithatha ingxenye enkulu kuyo.
The Black Forest, okanye Schwarzwald njengoko ibizwa ngokuba ngu-in German, na kwiindawo ezininzi imibono amahle engezansi. Kuba kananjalo lomfula emangalisa ezigodini libalele, iincopho gorgeous kweenduli ezininzi ungakwazi ukufumana apha.
Yintoni egqithisile, uya kufumana wonke loo mmandla langa kunye fairytale-like unyaka wonke! Oko kuyinyaniso kuba kubonakala umxhelo xa sele sunny, lwemvula, yaye xa kukho ikhephu ukuba. Unokubona ukuba iyasondela ezininzi imifanekiso yendawo.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/black-forest-by-train/- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)